VootCoin စျေး - အွန်လိုင်း VOOT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို VootCoin (VOOT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ VootCoin (VOOT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ VootCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ VootCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
VootCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VootCoinVOOT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0497VootCoinVOOT သို့ ယူရိုEUR€0.0419VootCoinVOOT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0379VootCoinVOOT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0452VootCoinVOOT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.441VootCoinVOOT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.312VootCoinVOOT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.09VootCoinVOOT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.184VootCoinVOOT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0657VootCoinVOOT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0692VootCoinVOOT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.11VootCoinVOOT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.385VootCoinVOOT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.27VootCoinVOOT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.72VootCoinVOOT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.8.36VootCoinVOOT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0681VootCoinVOOT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0756VootCoinVOOT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.54VootCoinVOOT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.345VootCoinVOOT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.3VootCoinVOOT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩58.8VootCoinVOOT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦19.09VootCoinVOOT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.64VootCoinVOOT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.37
VootCoinVOOT သို့ BitcoinBTC0.000004 VootCoinVOOT သို့ EthereumETH0.000129 VootCoinVOOT သို့ LitecoinLTC0.000913 VootCoinVOOT သို့ DigitalCashDASH0.000547 VootCoinVOOT သို့ MoneroXMR0.000558 VootCoinVOOT သို့ NxtNXT3.87 VootCoinVOOT သို့ Ethereum ClassicETC0.00732 VootCoinVOOT သို့ DogecoinDOGE14.33 VootCoinVOOT သို့ ZCashZEC0.000603 VootCoinVOOT သို့ BitsharesBTS1.53 VootCoinVOOT သို့ DigiByteDGB1.59 VootCoinVOOT သို့ RippleXRP0.176 VootCoinVOOT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00171 VootCoinVOOT သို့ PeerCoinPPC0.165 VootCoinVOOT သို့ CraigsCoinCRAIG22.63 VootCoinVOOT သို့ BitstakeXBS2.12 VootCoinVOOT သို့ PayCoinXPY0.867 VootCoinVOOT သို့ ProsperCoinPRC6.23 VootCoinVOOT သို့ YbCoinYBC0.00003 VootCoinVOOT သို့ DarkKushDANK15.94 VootCoinVOOT သို့ GiveCoinGIVE107.56 VootCoinVOOT သို့ KoboCoinKOBO11.31 VootCoinVOOT သို့ DarkTokenDT0.0457 VootCoinVOOT သို့ CETUS CoinCETI143.43